Basic terminology muEcommerce kana zvemagetsi commerce | ECommerce nhau
Basic terminology muEcommerce kana zvemagetsi zvekutengeserana
Kana iwe uri kungotanga kufamba kwako mune inonakidza yenyika yekutengesa zvemagetsi, zvine chokwadi chekuti uchasangana nemitsara kana mazwi anogara achishandiswa kutsanangura kana kureva zvigadzirwa, masevhisi, makambani, nezvimwe. Kuti ikubatsire zvishoma neizvi, pazasi isu tinogovana iyo Basic terminology muEcommerce kana zvemagetsi zvekutengeserana.
Bhizinesi kune Bhizinesi (B2B)
Icho chinongova bhizinesi modhi uye maitiro ekambani imwe inotengesa kune imwe kambani
Bhizinesi kuCostumer (B2C)
Iyo ibhizimusi modhi uye maitiro umo kambani inotengesa yakananga kune vatengi.
1 Mutengesi (Mutengesi)
2 Costomer Hupenyu Hwose Kukosha (CLV)
4 Kugadzika Peji peji
5 Chikamu chevatengi
6 Chishanu Chishanu
Munhu kana kambani inotenga zvigadzirwa zvakawanda kubva kune dzakasiyana vatengesi, nechinangwa chekuzvitengesa kune vatengesi zvakare vanozozvitengesa kune vatengi. Vanogadzira uye vatengesi kazhinji vanoshanda pamwe sevadyidzani kuburikidza neiyo nzira.
Costomer Hupenyu Hwose Kukosha (CLV)
Iko kufungidzira kwemangwana remari kana purofiti, kukosha uye mambure purofiti iyo mutengi anozogadzira panguva yehukama hwese nemutengesi.
Iyo metric iyo iri chikamu cheimwe zviyero izvo zvinoshandiswa kuongorora hutano hweEcommerce. Iyo inoverengerwa nekukamura huwandu hwevanhu vanopedzisa chakapihwa chiito nenhamba yevashanyi kune imwe peji peji kana maitiro.
Kugadzika Peji peji
Iyi ndiyo nzira yekugadzira, kuongorora uye kugadzirisa mapeji ekumisa kuti kuwedzere kushandurwa kwetraffic.
Inoreva kunongedza vatengi vanobatsira kwazvo uye avo vane mikana yepamusoro yekuwana mari. Izvi zvinogona kusanganisira vatengi vanodzoka, avhareji odha tsika, vatengi vanopa ongororo, pamwe nevatengi vanopindura zvinopihwa uye kukwidziridzwa.
Zuva rakatevera Kutenda muUnited States, iyo inowanzo kuratidza kutanga kwemwaka wekutenga uko vatengesi vanopa kukwidziridzwa uye kudzikisira kwakadzika pane zvigadzirwa zvese muzvitoro zvavo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » ECommerce kudzidziswa » Basic terminology muEcommerce kana zvemagetsi zvekutengeserana
MarketPress, WordPress plugin yeEcommerce
Mashandisiro ekushandisa Instagram kune yako Ecommerce